Geli: Astaamaha Ka Qeyb galka App App Aysan lahayn | Martech Zone
insert waxaa loogu talagalay sidaa darteed ololayaasha barnaamijka moobiilka ayaa lagu fulin karaa suuqleyda iyada oo aan loo baahnayn horumarinta barnaamijka mobilada. Barxadku wuxuu leeyahay qaabab fara badan oo ka qaybqaadasho ah oo si fudud loo gelin karo, loo cusbooneysiin karo, loona maamuli karo. Noocyo kala duwan ayaa loo dhisay suuqleyda iyo kooxaha wax soo saarka si ay u gaar yeelaan safarka isticmaalaha, kiciyaan wakhti kasta, kordhinta hawlgelinta, iyo cabbiraadda iyo falanqaynta waxqabadka barnaamijka. Barnaamijyadu waxay ku dhasheen macruufka iyo Android.
Astaamaha waxaa loo kala qaaday sideed meelood oo shaqeynaya, oo ay ku jiraan Tilmaamaha, Isgaarsiinta, Sifee, Beddelaad, Hawlgal, Hesho, Faham iyo Hindise. Kuwa soo socdaa waa tilmaanta muuqaalka ee ka Geli Hagaha Waxsoosaarka.
Guide Geliyayaashu waxay kaa caawinayaan inaad si guul leh uga saarto isticmaaleyaasha cusub una soo bandhigto kuwa jira muuqaalada iyo awoodaha dheeraadka ah.
Hordhac App - Ku hagaaji khibradaada isticmaale-isticmaale-yaasha 'app-time-first'. Hubso inay fahamsan yihiin qiimaha barnaamijka adoo soo bandhigaya astaamaha astaamaha ugu muhiimsan iyadoo la isticmaalayo daaqad u muuqata marka adeegsadehu marka hore furo barnaamijka.
Muuji Aagga App - U jeedi dareenka isticmaalayaasha barta gaarka ah ee barnaamijka adigoo “ku muujiya” aaggan qoraal sharraxaad leh. Ku fiicnaanshaha dusha sare, ama wadista isticmaalka astaamaha cusub.
Qalabka gacanta - Soo bandhig shaashad moobil ah oo sharraxaysa badhan ama muuqaal, oo leh qoraal tilmaamaya curiyaha gaarka ah ee barnaamijka, muuqaalka ama wicitaan-ku-fal.
Soo Jeediso Muuqaalka Barnaamijka - Xaaladda saxda ah, u soo jeedi adeegsadayaasha inay adeegsadaan astaamo gaar ah oo toos ah oo aad ula aaddo shaashadda barnaamijka ku habboon, adoo adeegsanaya xiriir qoto dheer.
Communications gelintu waxay abuureysaa wadahadal lala beegsanayo isticmaaleyaasha iyagoo diraya farriinta waqtiga saxda ah, oo kicisay isticmaalka gaarka ah ee barnaamijka, taariikhda isticmaaleha ama waxqabadka waqtiga-dhabta ah ee barnaamijka iyo waxyaabo kale oo badan, waxaana lagu bartilmaameedsan karaa si loo kordhiyo ka-qaybgalka adeegsadaha ee farriinta.
Farriinta gudaha ku jirta - Farriimaha gudaha ku jira ayaa ogeysiinaya isticmaaleha, waxaana la socon kara xiriiriye ama xiriiriye qoto dheer, wadista ficil degdeg ah. Farriimaha sida caadiga ah waxaa ka mid ah sawir iyo badhanka wicitaan-ficil oo u horseedi kara isticmaalaha shaashad barnaamij gaar ah.
Iskuduwid - Isdhexgalka waa sawirro shaashad-buuxa ah oo guji oo ka hawlgala inta u dhexeysa shaashadaha, hal shaashad ka hor iyo ka hor.
Fariin muuqaal ah - Isticmaalayaashu waxay jecel yihiin fiidiyowga, iyo farriimaha fiidiyowga ayaa ah hab fiican oo loogula xiriiro fariin 'shucuur' ama fariin murugsan oo dhaafsiisan heerka macluumaad ee caadiga ah.
banner - Si ka duwan sida loo kala dhex galo, boorarku waa sawirro yar yar oo la riixi karo oo lagu soo bandhigi karo qaybaha kala duwan ee shaashadda. Ku darida boor hoose ee barnaamijkaaga, waxaad la xiriiri kartaa isticmaaleyaashaada adigoon carqaladeyn isticmaalkooda barnaamijkooda, maadaama bannerku uusan ka hor istaageyn inay adeegsadaan barnaamijka.
Dheecaan waxay u saamaxdaa noocyada inay isbeddel macno ah ku sameyso abka si loo wado kaqeybgal, iyadoo wax laga beddelayo qoraalka barnaamijka, sawirrada ama mowduucyada.
Wax ka beddel qoraalka - Miyaad qoraal ku qortaa ama aad rabtaa inaad A / B tijaabiso dhowr xulasho qoraal? Marabtaa inaad ubadasho qoraallada barnaamijka munaasabad gaar ah ama fasax? Ma dooneysaa inaad bedesho qoraallada marka isticmaalehu uu dhammaystiro ficil cayiman oo ku saabsan barnaamijka? Calaamadee qoraalka aad rabto inaad ku bedesho shaashadda barnaamijka, ku beddel qoraalka cusub waadna fiicantahay inaad tagto.
Wax ka beddel sawirka - Beddel sawirrada barnaamijka si aad u hagaajiso arrimaha barnaamijka ama aad u aragto waxa sawirradu wadaan ka-qaybgal wanaagsan. Si fudud oo fudud oo aan lahayn-codeyn ah, xitaa marka isbeddelada muuqaalka ay kiciyaan oo keliya xaalad gaar ah, dhagaystayaasha qaarkood ama waqtiga.
Wax ka beddel Mawduuca - U beddel barnaamijka si aad u siiso mowduucyo xilliyeed, sida ciidaha ama dib ugu soo dir farriimaha dugsiga.
Conversion galinta waxaa loo sameeyay si loo sameeyo ujeedo iibsi iyo in la hubiyo inay ku dhamaato iibsi dhab ah. Waxay abuuraan ujeedo ah inay iibsadaan, halka waqtiga isticmaalka xusuusinta gawaarida ay u rogi karto isticmaaleyaasha inay dib u bilaabaan wax iibsiyada la dayacay.
Iibiyay - Si aad ugu wargeliso kuwa iibsan kara waxa ku jira iyo sababta ay hadda u iibsanayaan, waxaad soo bandhigi kartaa dalab ficil ah oo wata kuubon. Dhagsii waxay ku qaadataa dadka isticmaala shaashadda barnaamijka la xidhiidha ama waxay furaysaa biraawsar.
Xusuusin gaariga (riix) - Markay isticmaaleyaashu wali alaabtu ku jiraan gaadhigooda, u oggolow inay soo noqdaan oo ay dhammaystiraan iibsiga ogeysiis shakhsi ahaaneed oo si qoto dheer ugu xidha shaashadda gaadhiga.
Fariin ku jirta app - waxyaabaha lagu rido farriimaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu xusuusiyo dadka isticmaala gawaaridooda dukaameysiga ah ee laga tagay marka xigta ee ay bilaabaan barnaamijka.
Soo saarista bogga - si fudud ugu abuurta boggag degitaan loo habeeyay barnaamijkooda dhexdooda, iyagoo hubinaya in macaamiisha ay ka yimaadaan ogeysiisyada riixitaanka gaarka ah, xayeysiinta, warbaahinta bulshada ama emayllada bogagga degista shaqsiyadeed ee loogu talagalay isbadalka ugu badan.
Iskuduwid - Isdhexgalka waa sawirro shaashad-buuxa ah oo guji oo ka hawlgala inta u dhexeysa shaashadaha, hal shaashad ka hor iyo ka hor. Waxay u jiheeyaan dadka isticmaala shaashadda barnaamijka ama bogga internetka waxaana caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu gudbiyo macluumaadka waqtiga xasaasiga ah sida iibka maanta, dhiirrigelinta iwm.
Ka qaybgal - Bartilmaameedyada bartilmaameedka oo kiciya iyaga, xitaa habab socodka shaqada oo adag.
Dib-u-hawlgal isticmaalayaasha nasashada - Dib-ula-hawlgal isticmaalayaasha nasashada adoo adeegsanaya dalabyo gaar ah oo waqti xaddidan leh, farriimo bartilmaameed ah iyo in ka badan. Qeex oo qeex isticmaalayaasha nasashada oo bartilmaameedsada waxyaalo kala duwan qayb kasta.
Ku Soo Dhawaada Isticmaalayaasha Nasashada - Qeex cidda adeegsadayaashaadu yihiin, iyada oo ku saleysan qaababka isticmaalkooda iyo inbadan, oo muuji qadarintaada dalabyo gaar ah, qiimo dhimis, marin u helid ama dallacsiin.
Kordhinta nooca - Abuur farriin ogeysiis gudaha ah oo ku ogeysiisa isticmaaleyaasha helitaanka nooc cusub oo app ah, adigoo ku xiraya.
Hel - Gelinta wax iibsigu waxay ku koraan saldhigga isticmaalaha barnaamijka iyada oo loo marayo qiimeynno wanaagsan oo app ah ama kor u qaadis ah app. Qaybtani waxay u baahan tahay mulkiilaha barnaamijka inuu ku tijaabiyo waqtiga saxda ah, si markaa adeegsadayaashu u helaan waxyaabo ay ku iibsadaan waxyaabo aan ka hor imaanayn isticmaalkooda barnaamijka.
Gelinta Muunad Qaadashada - U adeegso qoraalkan si aad ugu boorriso isticmaaleyaasha inay wadaagaan barnaamijka ama waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada.
Dhiirrigelinta iskutallaabta - Ka gudub barnaamijyada kale, adoo u soo jeedinaya dadka isticmaala barnaamijka.
Qiimee abka - Weydii isticmaaleyaasha qiimeynta abka waqtiga saxda ah - markay khibrad moobiil fiican la kulmeen - oo aanad ka dhexgelin. Waxaan kugula talineynaa xulashada isticmaaleyaasha korontada barnaamijkaaga, maadaama ay u badan tahay inay bixiyaan qiimeyn sare.
Fahmaan Helitaanka jawaabaha saxda ah ee su'aalaha ku saabsan dookha isticmaalaha, astaamaha ama jawaab celinta waa cunsur muhiim u ah hawlgelinta barnaamijka moobilka. Qaybtani waxay ka kooban tahay sahan, Analytics iyo gelinta taageerada.
Muunad Fahmitar Gelinta - Ku xirnow isticmaalayaashaada si aad uga hesho jawaab celin-waqtiga dhabta ah ee astaamaha cusub ee app, qiimaha barnaamijka, dookhaaga shaqsiyadeed, iyo mowduuc kasta oo kale, adoo adeegsanaya sahan hal su'aal ah
Sahan su'aalo badan - Sahamin su'aalo badan leh ayaa lagu soo bandhigi karaa hal shaashad ama ku siibixiye.
Dhoofinta gorfaynta google - Qormadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad calaamadeyso dhacdada aad jeceshahay inaad kala socoto shaashadda, adoo adeegsanaya websaydhkeena, oo leh Analytics ku saabsan dhacdadaas oo loo diray waqtiga dhabta ah koontadaada Google Analytics.
Hal-abuur waxay u saamaxdaa summadaha inay abuuraan waxyaabo ku-meel-gaar ah adoo adeegsanaya wax kasta oo HTML ah, si ay u muujiyaan meel kasta oo ka mid ah barnaamijkaaga, oo leh awood isku mid ah oo ay ku kicinayaan waxyaabaha la gelinayo barnaamijka dhexdiisa, adeegsadaha isticmaalaha iyo bartilmaameedka dhagaystayaasha qaarkood.
Tags: gudaha ku jirasuuq-geynta barnaamijkafarriinta ku jirta barnaamijkafarriimaha moobilka ku jirageliisdhexgalkaapp mobilefalanqaynta barnaamijka moobiilkakuuboonada barnaamijka moobiilkajawaab celinta barnaamijka moobilkamuuqaalka app mobilebarnaamijka mobilada interstitialsuuqgeynta barnaamijka mobiladahagaajinta barnaamijka moobiilkadaabacaadda barnaamijka moobiilkafarriimaha moobilka riixabarnaamijka mobilada ayaa soo jeedinaya jawaab celinsahaminta barnaamijka moobiilkatijaabada moobilkaQalabka moobilka gacantafarriinta casriyeynta moobilkasocodka barnaamijka appmoobilka moobilka fariimo soo dhaweyn ahapps mobilekuuboonada wareegaisdhexgalka moobiilkafarriinta moobaylka ahsahan loogu talagalay barnaamijyada moobiilkamadal sahan oo loogu talagalay barnaamijyada moobiilka